(Dhegeyso)Madaxweyne Muuse Biixi Oo Ka Hadlay Kulankii Dhex maray Farmaajo Iyo Faysal Cali Waraabe”Waa laga xisaabtamayaa” | Puntland
Madaxweynaha Maamulka Somaliland,Muuse Biixi Cabdi ayaa si kulul uga hadlay markii ugu horeysay Shirkii lagu qabtay magaalada Brussels ee dalka Beljam-ka kaas oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo arrimo kale
Waxa uu sheegay Muuse Biixi in shirkaas loo qabtay Soomaaliya islamarkaana sheegay in shirkaas aan u qalmin Soomaaliland in ay ka qeyb gasho,waxa uunta tilmaamay in ay iska diideyn ka qeyb galka shirkaas sida uu hadalka u dhigay.
“Deeq iyo adduun siisan mayno gobonnimadayada iyo rabitaanka dadkayaga, waxaana aanu go’aansannay inaanu dawlad gaar ah oo madax bannaan noqonno, Yurub iyo Maraykan baa lacag qaybinaysa nooma taallo haddaan annaga toos naloo siinaynin.
Wuxuu sidoo kale sheegay Madaxweynaha Soomaaliland markii uu arkay Guddoomiyayhan Xisbiga Mucaaradka ee UCID,Fasal Cali Waraabe oo la fadhiyo Madaxweyna soomaaliya iyo tegitaankii madasha shirka ay amakaag ku noqotay.
“Runtii anga shiraksi nama quseyn soomaaliya ayaa loo qabanayey laakin markii aan arkay Feysal Cali Waraabe oo la fadhiya Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ay la amakaageen oo layaab ay ku noqotay arrintaasi ay tahay mid u baahan in dib loogu noqdo ayuu yiri Madaxweyne Muuse Biixi.
Kulankii Magalada Brussels ee dalka Biljamk-ka ku dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya iyo Guddoomiyayhan Xisbiga Mucaaradka ee UCID,Fasal Cali Waraabe ayaa waxaa intiisa badan looga Hadley qaboojinta xiisada deegaanka Tukaraq.